Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Tabobbar u Furtay Xubno Shaqaalaha Wasaaradda Ka Tirsan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Tabobbar u Furtay Xubno Shaqaalaha Wasaaradda...
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland oo Tabobbar u Furtay Xubno Shaqaalaha Wasaaradda Ka Tirsan
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Jamhuuriyadda Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, ayaa Tabobbar u furay Xubno ka tirsan Shaqaalaha Waaxyaha kala duwan ee Wasaaradda, kaas oo ku saabsan Maamulka iyo Maaraynta Shaqada Xafiisyada, isla markaana kor loogu qaadayo aqoonta shaqaalaha.
Tobabbarkan oo socon doona muddo afar maalmood ah, ayaa maanta ka furmay xarunta wasaaradda ee magaalada Hargeysa, waxaanu noqonaya midkii koowaad ee sannadkan bilawga ah ee 2020-ka lagu ballaysimo tayeynta shaqaalaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta, iyadoo sannadkii dhammaaday ee 2019-kii afar tabobbar oo kala duwan la siiyey shaqaalaha Waaxyaha Wasaaradda ka hawlgala, kuwaas oo shaqaalo badani ka faa’iidaysteen, aqoontii ay barteenna ku dabbaqeen shaqooyinka ay wasaaradda u hayaan.
Furitaankii aqoon-korodhsigan waxaa ka hadlay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Sheekh Aadan Cabdillaahi Cabdalla oo faahfaahiyey ujeeddada Tabobbarkan, waxaanu tilmaamay inay masuuliyiin ahaan masuuliyadi ka saarantay kor u qaadista aqoonta shaqaalaha, si shaqada ay Qaranka u qabanayaan u noqoto mid tayo leh oo aqoon lagu hago.
“Tabobbarkan oo ah mid aad iyo aad u muhiim ah oo lagaga hadlay habsami u socodka iyo qiimaha shaqada. Waynu ognahay oo Qofkastaa Jaamacad buu ka baxay, laakiin tabobbarka shaqada dhexdeeda lagu qaataa aad buu uga wanaagsan yahay aqoonta caadiga ah, markaa waan bogaadinayaa Kooxda nasiibka u yeelatay Shaqaalaha inay tabobbarkan qaataan.” Sidaa ayuu yidhi Agaasimaha guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland.
Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed, ayaa gebogabadii halkaas ka hadlay, waxaanu ka warramay muhiimadda barashada Cilmigu hadduu Diini yahay iyo hadduu Maaddi yahayba u leeyahay horumarka Aadamaha ee Aakhiro iyo Adduunba, Shaqaalaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaaftana ay muhiimad gaar ah u leedahay inay dhisaan aqoontooda, maaddaama oo ay Wasaaraddu Qaranka Somaliland masuul uga tahay Diinta Islaamka.